I-AUTOTRADE CRYPTO - ATC - Bitcoin BTC/USD Irobhothi Lokuhweba
I-BTC / ETH / BNB / LTC
Irobhothi lokuhweba elinikezelwe kuBitcoin
I-AutoTrade Crypto iyi- ukuhweba irobhothi Imakethe ye-cryptocurrency esekwe e-Indonesia. I-ATC izohweba ngezimali ezinkulu ze-crypto ezifana ne-Bitcoin, Binance I-Coin, i-Ethereum ne-Litecoin kodwa ingaphinde ikhethe enye i-crypto kuye ngenani lemakethe lalokhu. Kungase kube nokuhwebelana okuningana phakathi nosuku, zonke izinsuku zeviki. I-Autotrade Crypto ukubheja ekukhuphukeni noma ekuweni kwentengo ye-Bitcoin ikakhulukazi. Ngokwesilinganiso, u-70% wemisebenzi yakhe yansuku zonke abawinile.
Bhalisa ku-Autotrade CryptoOkokufundisa okubuyekeziwe
Intengo yelayisensi 1 ku-AutoTrade Crypto
Utshalomali oluncane jikelele
Izinzuzo zerobhothi ye-AutoTrade Crypto
Phatha futhi ulawule izimali zakho usebenzisa izinhlelo zokusebenza MetaTrader 4. Faka idiphozi futhi ukhiphe noma kunini. Nguwe kuphela onokufinyelela kutshalomali lwakho: Isikhwama sokuqala + izinzuzo ezikhiqizwayo + inzalo ehlanganisiwe.
Ayikho isofthiwe engafakwa. Konke kwenziwa ku-inthanethi.
Imakethe ye-idijithali yemali
Izixazululo zokuhweba zigxile enanini le-Bitcoin. Ukuhweba izinsuku ezingu-7/7.
Isilinganiso semali engenayo ephakathi kuka-15 no-20%.
Izinyanga eziyi-8 zesipiliyoni
Kubandakanya izivivinyo zezinyanga eziyi-3 ezimeni zangempela zemakethe.
Qala ngomzuzu. ka-$1300, ilayisensi ifakiwe.
Imiphumela esobala ngesikhathi sangempela ku-MT4 yakho.
Igalari Yezithombe Autotrade Crypto ku-Instagram
Ukulingisa Inzuzo Yanyanga zonke nge-AutoTrade Crypto
Ithebula elingezansi kufanele lithathwe njengesibonelo futhi alikwazi ukubonisa iqiniso elinembile. Kubonisa ukuvela kwezimali zakho zemali ngokwenani elidiphozithwe ngokusekelwe ekwenyukeni okwandayo kwe-15% ngenyanga.
+ 300 abatshalizimali emhlabeni jikelele Imiphumela ye-AutoTrade Crypto
+ ilayisense 2 ($ 620)
Amalayisense angathuthukiswa. Uzokhokha kuphela umehluko phakathi kwazo zonke.
Ilayisense 1 ku-ATC ikhawulelwe ku-$5000 emalini futhi Ilayisensi 2 ikhawulelwe ku-$20000. Lokhu kusho ukuthi uma uthatha ilayisense 1 bese ufaka u-$5000 emalini, irobhothi lakho ngeke lisebenze uze uthuthukele kulayisense elandelayo. Esinye isibonelo, uma ngelayisense 2, ufaka u-$19,000, irobhothi lakho lizohweba kuze kube lithola u-$20,000 bese liyama uze uthathe ilayisense ephezulu. Konke kuncike emalini yakho oyifakile ne- broker, umholo wakho wansuku zonke kanye nenzalo yakho ehlanganisiwe.
ngemali efakwe phakathi kwe- $ 1000 ne- $ 5000.
ngemali efakwe phakathi kwe- $ 1000 ne- $ 20000.
ngemali efakwe phakathi kwe- $ 1000 ne- $ 50,000.
ngemali eyinhloko phakathi kwe-1000 ne-300,000 $.
ngemali enkulu eyizigidi eziyi-10 zamaRandi.
Usuvele unayo i-akhawunti Autotrade Gold ?
Uma usuvele unayo i-akhawunti ye-ATG 5, izinyathelo 1, 2 no-4 akudingekile ukuthi zenziwe.
Izinyathelo eziyi-14 okufanele zilandelwe ukubhalisa ku-robot I-Autotrade Crypto
Ngincoma ukusetshenziswa kwe-a Ikheli le-Yahoo noma le-Gmail uma ubhalisa. Abanye babenezinkinga zokuqinisekisa i-OTP ngamakheli e-Wanadoo, e-Laposte noma e-Hotmail.
Bhalisa ku-AutoTrade Crypto 5.0
Khumbula ireferensi IB I-IB04231237
Chofoza inkinobho ethi "Okulandelayo" ngezansi kwesokudla bese ugcwalisa zonke izinkambu eziceliwe kuzinyathelo ezi-4.
✅ Uma ungenayo i-akhawunti ye-cryptocurrency, ngiyakweluleka, khona manje, ukudala i-akhawunti ku- Binance. Ungathenga i-crypto Binance ngekhadi lakho lesikweletu. Nokho, uzovinjwa ngomkhawulo wokuhoxa okhawulelwe yibhange lakho. Ukuze wenze imali ebhange futhi ngaleyo ndlela ufake izimali ezinkulu, ungavula i-akhawunti Coinbase, Crypto.com noma sebenzisa isevisi enikezwa ngu I-Advcash ivuliwe Binance.
Unganqikazi ukungithinta ku-💬 yocingo ukuze ngikweluleke.
Uma ungayitholi i-imeyili yokuqinisekisa, khumbula ukusebenzisa ikheli le-imeyili le-gmail noma le-yahoo. Uma inombolo yakho yocingo isivele ibhalisiwe, ungayibuyisela emuva bese ufaka u-06 esikhundleni sika-336, uma uhlala eFrance. Sebenzisa uphawu lwekholi njengethuba lesibili.
Isinyathelo 2 / PantheraTrade
Qinisekisa i-akhawunti yakho ku- PantheraTrade.phila
Uma usuxhunywe ngemininingwane yakho ekhasini lasekhaya, uzodinga qinisekisa i-akhawunti yakho, (kunikezwa inkinobho ekhasini lasekhaya). Ngeke ukwazi ukuqinisekisa i-akhawunti yakho Pantheratrade kuphela uma une-akhawunti evumelekile ye-crypto. Pantheratrade izokucela ukuthi wengeze ikheli lakho lediphozithi ye-crypto, ukuze uthole okuwinile kwakho.
⚠️ Gcwalisa kahle zonke izinkambu zefomu. Ayikho inkambu engashiywa ingenalutho.
Gcwalisa izinkambu zekheli lokuposa.
Endaweni Bank, khombisa "Other bank"kanye nenombolo ye-akhawunti yakho yasebhange noma i-IBAN ngokwesibonelo. Ngaphandle uma uhlala e-Indonesia, ngeke bayisebenzise le nkambu.
Ngemali ye-Crypto, Khombisa Inikwe amandla.
Endaweni ye-Akhawunti ye-Crypto, khetha USDT (ETH Ethereum ERC-20) noma (TRX Tron TRC-20). I-Tron blockchain izoba iyonga kakhulu. Ngaleyo ndlela uzothola umholo wakho nge-stablecoin esekelwa idola, ngaphandle kokuguquguquka kwemakethe.
Ikheli le-Crypto: ikheli USDT idiphozi ku- Binance.
Okungcono ukhethe inethiwekhi ye-Tron TRC-20. Amanye ama-blockchain afana ne-Sol noma i-Bsc... awamukelwa.
⚠️ I-imeyili ye-OTP: Faka "ikhodi" yakho ye-imeyili OTP. Lena ikhodi osanda kuyithola nge-imeyili. Esigabeni se-OTP, faka ikhodi njengasesibonelweni esingezansi. Ungamaki ikheli le-imeyili, ngeke lisebenze.
Ekugcineni, thumela eyakho I-ID evumelekile (umazisi, ipasipoti noma ilayisense yokushayela) kanye nesithombe ozishuthe sona esine-ID yakho eduze nobuso bakho. Ukuze wenze lokhu, chofoza isixhumanisi se-IMGLINK.IO. Hudula bese udedela isithombe sakho bese ukopisha unamathisele i-url esakazwa endaweni efanele efomini Pantheratrade. I-Avatar ne-ID Yentela uyazikhethela. Faka iphasiwedi yakho, bese uchofoza Update ukubhalisa.
USDT iqhudelana ne-LTC
Sisho lapha ikheli le-crypto USDT ukuze ugweme noma yikuphi ukuguquguquka emalini oyitholayo uma uwathola. Ezinyathelweni ezilandelayo, sizokhuluma nge-Litecoin (LTC) ukuze ukhokhele ilayisense futhi uthumele imali ku- broker. Sisebenzisa i-Litecoin ngesivinini sayo kanye nezindleko eziphansi zokuthengiselana. Ngakho-ke uzokhokha nge-LTC futhi uzothola umholo wakho USDT.
Isinyathelo 3 / PantheraTrade
Ukuvula i-akhawunti yokuhweba ku- PantheraTrade.
Awudingi ukulinda i-akhawunti yakho ukuthi iqinisekiswe ukuze uqhubekele ezinyathelweni ezilandelayo.
Iya kuthebhu Trading Account > Open Live Account.
Bonisa izinkambu ezilandelayo:
Broker : I-LegoMarket LCC
Account Type : I-Crypto
Leverage : I-1: 500 (akusekho okungaphansi)
Real / Idemo: Real
Create MT4 Password : Ngikweluleka ukuthi usebenzise iphasiwedi efanayo naleyo yokuxhumeka kwakho Pantheratrade
Bhalisa ku Pansaka ukuphatha ilayisense yakho ye-ATG 5
I-Pansaka yinkampani ephethe wonke amalayisensi emikhiqizo yokuhweba ye-Autotrade. Khumbula ukuthi kufanele ube ne-Litecoin LTC ekushintshanisweni kwakho ukuze uthenge ilayisense yakho.
Ikheli le-Crypto: Ikheli lediphozi USDT
Ungayithenga kanjani noma uyithuthukise kanjani ilayisense yakho ATC I-Crypto?
Ekhasini eliyisiqalo lenkampani yePansaka, chofoza kuthebhu Uhlelo Olukhethekile> Thenga Iphakheji Eliphelele bese ukhetha ilayisense ngokwamandla akho okuhweba.
💡 Ngikweluleka ukuthi uqale ngelayisensi 1 kanye nediphozithi engu-€200 ukuze uhlaziye ukuhweba kwerobhothi kanye nekhono lalo lokukhiqiza imali engenayo. Ungabese uthuthukisa amalayisensi akho ngokukhokha kuphela umehluko phakathi kwalelo nalelo. Ngakho qala ngokuthenga i-Litecoin (LTC) ku Binance ngenani le- 1200 € ngekhadi lesikweletu.
Ukuze ukhokhele ilayisense yakho bese ufaka imali yakho ku- broker, sincoma ukuthi uthenge futhi ukhokhe ku-Litecoin (LTC) ukuze kube lula, isivinini, kanye nezinkokhelo zayo zokwenziwe.
Kuthatha ihora ukuze ilayisense yakho isebenze usebenzisa i-CoinPayment. Uzothola i-imeyili efaka amakhodi okuqinisekisa ilayisense yakho esinyathelweni se-13 sokufundisa.
Isiteji 6 / iPansaka
Inkinobho 1: Chofoza le nkinobho ukuze ukhethe inkokhelo nge-cryptocurrency. Kuzovela i-popup, chofoza inkinobho ye-Crypto bese uqinisekisa.
Isiteji 7 / iPansaka
Isinyathelo 8 / Ukukhokhelwa kwemali
Ukukhokhwa kwelayisense yakho I-Autotrade Crypto kuLitecoin (LTC), neCoinPayment.
Ekugcineni, chofoza inkinobho eluhlaza okwesibhakabhaka ngakwesobunxele, ngaphansi kwe-imeyili, ukuqinisekisa ifomu. Akudingekile ukubhalisa neCoinPayment ukuqedela okwenziwayo.
Ikhasi elisha lizovulwa ku-CoinPayment futhi likunikeze ifayela le- inani kanye neIkheli le-LTC lapho uzodinga ukudlulisela khona i-Litecoin (LTC) yakho esele ithengiwe kushintshiselwano lwakho (Binance, Coinbase, njll.).
On Binance, nasi isixhumanisi se thenga i-Litecoin ekhadini lasebhange. Uma kungenjalo sebenzisa I-AdsCash yokwenza ukudluliselwa kwe-SEPA. Binance kufanele iphinde ivule ukudluliselwa kwekhredithi kwe-SEPA endaweni yayo.
Isinyathelo 9 / Binance
Ukuqedela ukukhokhelwa kwelayisense yakho I-Autotrade Crypto I-ATC.
Iya ekushintsheni kwakho njenge Binance, yenza ukuhoxiswa ngqo kukheli eliceliwe le-LTC. Khumbula ukufaka i-0,001 LTC kunani eliceliwe ngaphandle kwalokho okwenziwayo kuzokwaliwa.
Uzothola i-imeyili yokuqinisekisa ngo- Binance kanye ne-CoinPayment echaza ukuthi ukudluliselwa kuphumelele. Uma wenze iphutha, ungathuki! Uzothola i-imeyili ezobuyiselwa inani emizuzwini embalwa. Hlola ugaxekile wakho. Kufanele usho eyakho Ikheli lediphozi le-LTC.
Kucatshangwa ukuthi ilayisensi isemgudwini wokukhokha (ukuyibheka, ngena ekhasini lasekhaya le Pantheratrade. Isimo se-EA: Siyasebenza).
Sibuyela kusayithi PantheraTrade ukuze ubeke imali yokuhweba nge broker I-LegoMarket.
Chofoza Okwenziwayo> Idiphozithi, bese ukhetha Imali Yezimali.
Khetha i-Akhawunti: inombolo ye-akhawunti yakho ye-ATC
Ikhasi elisha lizovulwa ku-CoinPayments ekunikeze inani kanye nekheli lapho uzodinga khona ukufaka i-Litecoins LTC yakho.
Kuze kube yilapho ukusekelwa kwezobuchwepheshe kwe-Auto Trade Crypto kuqinisekisa okwenziwayo, ngeke ulibone inani lakho kuhlelo lwakho lokusebenza lwe-MT4.
Isiteji 13 / Pansaka / ATC Bot
Hlanganisa i-ATC Bot nePansaka
Xhuma ku-ATC Bot
Ukuze uxhume ku-atcbot.io, sebenzisa i-imeyili efanayo nephasiwedi njengokuvula Pantheratrade.
uzokwenza kanjalo thola i-imeyili kusuka kusayithi le-acbot.io (futhi hlola ugaxekile wakho).
Iya kuwebhusayithi ye-ATC Bot usebenzisa amakhodi akho Pantheratrade futhi wenze ilayisense yakho isebenze: https://atcbot.io/user/ea/activate
Khetha ifayela lakho le- i-akhawunti ye-crypto
Qiniseka ukuthi ilayisense yakho "Ixhunyiwe". Chofoza inkinobho ethi "Vuselela" uma kunesidingo kuze kube yilapho kwenzeka. Zama ngemva kwamahora ambalwa uma inethiwekhi igcwele, kungenjalo vula a Ithikithi lokusekela lobuchwepheshe le-ATCBot ukuze bavule irobhothi lakho le-ATC.
Uma sekufakiwe, sizoyisethela i-akhawunti yakho yokuhweba. Ukuze wenze kanjalo, kufanele ngabe uthole i-imeyili evela ku- PantheraTrade nge 4 idatha ezibalulekile.
Kuhlelo lokusebenza lwe-MT4, chofoza okuthi Amasethingi> I-akhawunti entsha> Ngena ngemvume nge-akhawunti ekhona.
Igama lomsebenzisi: Ukungena (izinombolo). Uzobathola ekhasini lasekhaya le- Pantheratrade.
Ungakhipha kuphela imali yediphozi yakho yokuqala. Uma ukhombisile USDT kwikheli le-Crypto, uzothola USDT. Sicela uqaphele ukuthi ukuhoxiswa kwemali okungenani kungu-$50 kanye nesilinganiso esiphezulu esingu-$2000 ngosuku kuma-akhawunti angaphansi kuka-$100.000. Ngaphandle kwama- $ 100.000 afakiwe (futhi angatholwa), ungakhipha i-10% yemali ngosuku. Bala 10 kuya ku-30 ​​$ amanani okwenziwayo (ngaphandle kwenani olifunayo), kuye ngemali ekhethiwe.
Ungaxhumana kanjani nosekelo lobuchwepheshe I-Autotrade Crypto ?
Ungathanda umxhasi irobhothi le-ATC kusuka PantheraTrade ?
I-Autotrade Crypto Sponsorship Commissions
Kubantu ababhalise ne-AutoTrade Crypto ngaphambi komhlaka-1 Septhemba 2021, kungenzeka ukuthi awuzitholanga iziqinisekiso zakho zokungena ze-Pansaka nge-imeyili. Nasi isixazululo sokuwathola:
Gxila ku-CEO we-Autotrade, uMnu Dinar Wahyu Kenzo
U-Dinar Wahyu Kenzo (ophakathi) oyi-CEO ye-Autotrade / Pansaka kanye no-Bambang Soesatyo, usomlomo wephalamende lase-Indonesia.